एस्टोर्गाको लेओनी शहरमा के हेर्ने पत्ता लगाउनुहोस् यात्रा समाचार
के तपाईं छोटो साताको अन्त्यमा जानुहुन्छ? ठुलो गन्तव्य पत्ता लगाउन ठुलो यात्राको लागि धेरै दिनहरू आवश्यक पर्दछ, तर हामीले सप्ताहन्त खेर फाल्नु हुँदैन किनकि केही दिनहरूमा हामी साना ठाउँहरू देख्न सक्छौं जुन हामीलाई देखाउनको लागि धेरै छ, जस्तो कि एस्टोर्गाको लेनिस जनसंख्या। एक साधारण यात्रा जसमा आफ्नो ईतिहासको साथ शान्त ठाउँको मजा लिने।
En एस्टोर्गा हामी लिन प्रान्तको बीचमा भेट्नेछौं र हामी केहि स्मारकहरूको आनन्द लिने छौं तर आश्चर्य चकलेट संग्रहालय जस्ता आश्चर्य पनि। किनभने यी सानो getaways ले हाम्रो भूगोलको सबै कुनामा जान्ने धेरै रोचक यात्रा गर्न सक्छ।
1 कसरी एस्टोर्गामा पुग्ने
2 एस्टोर्गाको सानो इतिहास
3 एस्टोर्गामा के हेर्ने
3.1 एस्टिस्कोल दरबार एस्टोर्गा
3.2 एस्टोर्गा क्याथेड्रल
3.3 चकलेट संग्रहालय
3.4 एस्टोर्गाको रोमन संग्रहालय
कसरी एस्टोर्गामा पुग्ने
El सुरूवात बिन्दु लेन हुनेछकिनकि यहाँ देशको कुनै पनि स्थानबाट पुग्न सजिलो छ र हामी हवाईजहाजबाट पनि पुग्न सक्छौं। यस बाटोमा, हामीले केवल AP-71 र N-120 राजमार्ग लग्रोñ्गोबाट लिनु पर्छ जुन एस्टोर्गामा जान्छ। केही छिमेकी शहरहरूको तुलनामा यो निकै ठूलो स्थान हो, त्यसैले हामी यसलाई राम्रोसँग साइनपोष्ट गरिएको भेट्टाउनेछौं।
एस्टोर्गाको सानो इतिहास
यो सानो शहर रोमन शिविरको रूपमा जन्म भएको थियो जहाँ जनसंख्या पछि बसोबास गरे। यो स्पेनको उत्तरसँगको व्यापारको कारण समृद्ध स्थान बन्न गयो र यो एपिस्कोपल सिट पनि हो, जुन १ century औं शताब्दीदेखि क्यामिनो डे स्यान्टियागोलाई धन्यवाद दिइयो। शताब्दीहरूमा XIX र XX यसको औद्योगिक विकासमा बाँचिरहे चकलेट ट्रेड र रेलमार्ग उद्योगको साथ, जसले यसलाई बढाउँदै गयो। आज यो प्रख्यात क्यामिनो डे स्यान्टियागोमा जाने ठाउँ र दक्षिण दिशामा पर्ने भिया दि ला प्लाटाको अंशको रूपमा खडा छ।
एस्टोर्गामा के हेर्ने
अस्टोर्गा शहर पछि केहि बढी पर्यटकीय छ स्यान्टियागोको सडक हालसालैका वर्षहरूमा यो बढेको छ, तर प्रायद्वीपमा यो सधैं नै एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक बिन्दु नै थियो। हामी यसका केही प्रतीकात्मक स्मारकहरू र शहरमा हामी देख्न सक्ने सबै चीजहरू देख्दछौं, चाहे हामी पार गर्दैछौं वा यदि हामीले कुनै चाखलाग्दो बाटो बनाएका छौं।
एस्टोर्गाको एस्पिकोपाल दरबार हेर्न लायकको ठाउँ हो किनकि यस्तो लाग्छ कि हामी फेयरीकिल्ला महलको अगाडि छौं। यो एक को बारे मा छ नव गोथिक शैली भवन जसको प्रोजेक्ट गौडाद्वारा सिर्जना गरिएको हो। हामी भन्छौं कि यो महल जस्तो देखिन्छ किनकि बाहिरबाट हामी युद्धपट्टि, टावरहरू र एक खाडल पनि पाउँछौं। तर यस भवनको बारेमा अचम्मको कुरा यो हो कि हामी प्रवेश गरेपछि हामी आफूलाई एउटा भवनमा भेट्दछौं जुन चर्च जस्तो देखिन्छ। तपाईंले यसको सबै विवरणहरू हेर्नुपर्नेछ, किनकि यस प्रोजेक्टमा गौडेले विचारहरू प्रस्तुत गरे जुन उसले पछि प्रयोग गर्ने छ। दरबार भित्र तपाईले विशेष गरी सुन्दर चैपल, रमाईलो विवरणसहित र तहखानेको मध्यकालीन पक्षको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यसमा म्युजिओ डे लस क्यामिनोस रहेको छ जुन क्यामिनो डे स्यान्टियागोलाई समर्पित छ जुन सहरबाट भएर जान्छ। दरबार सोमबार बन्द रहन्छ, अगस्तमा बाहेक, र आइतवारहरू, केही छुट्टिहरू बाहेक। दरबार, क्याथेड्रल र संग्रहालयहरू हेर्न संयुक्त टिकट किन्न सम्भव छ।
यो क्याथेड्रल को सीट हो एस्टिसगापालको एपिस्कोपल डायोसीस, महान प्राचीनता को। १ cat औं शताब्दीमा यो क्याथेड्रलमा विभिन्न शैलीहरू समावेश छन्, किनकि यो विभिन्न समयमा निर्माण गरिएको थियो। यसको बारोक फ्याडे, विवरणहरू पूर्ण, वा दक्षिणी ढोका रेनेसान शैलीमा हाइलाइट हुनुपर्दछ। यो सान्ता मारियालाई समर्पित छ र भित्र तपाईं बिभिन्न ठाउँहरू, अंग वा क्लिस्टर देख्न सक्नुहुनेछ। मुख्य चैपल विवरणहरूले भरिएको छ र क्याथेड्रल संग्रहालय नौ मूल्यको कोठाबाट बनेको छ जुन ठूलो मूल्यको काम गर्दछ।
हामीले भर्खरै तपाईलाई बिभिन्न चकलेट संग्रहालयहरू बारे बताएका थियौं जुन विश्वभरि थियो र हामी पनि हाम्रो देशमा रहेको एउटामा रोक्यौं, ठीक एस्टोर्गामा। यो स muse्ग्रहालय शहरमा भएको कारण वर्षौंको लागि हो चकलेट उद्योग यो क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण थियो, यसैले उनीहरूले चकलेटको निर्माण र ईतिहासमा समर्पित संग्रहालय सिर्जना गरेका छन्। संग्रहालय भित्र तपाईं चकलेट को ईतिहास को माध्यम बाट यात्रा को मजा लिन सक्नुहुन्छ, मसिनहरु को साथ हेर्नुहोस् जुन यो स्वादिष्ट खाना निर्मित छ र फोटोग्राफहरु को मजा लिनुहोस् जुन हामीलाई यसको उत्पादन र विज्ञापनको बारेमा अधिक जान्न मद्दत गर्दछ। बच्चाहरूसँग जानको लागि यो पनि राम्रो ठाउँ हो किनभने संग्रहालयले साना बच्चाहरूको लागि गतिविधिहरू राख्छ। सावधान हुनुहोस्, किनकि यो संग्रहालय सामान्यतया सोमबार बन्द हुन्छ, धेरै अरूहरू जस्तै, र केही खास दिनहरूमा पनि, त्यसैले भ्रमण गर्नु अघि सुरुको घण्टा जाँच गर्नु बेस हुन्छ।
एस्टोर्गाको रोमन संग्रहालय
यदि तपाईं यसका बारे बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने पुरानो अस्ट्रिका अगस्टात्यसोभए तपाईंले एस्टोर्गाको रोमन संग्रहालय भ्रमण गर्नुपर्नेछ, जहाँ रोमीहरूले प्रायद्वीपमा शासन गरेको बेला त्यस दिनको दैनिक जीवन कस्तो थियो भनेर हामीलाई बताउँछ। थप रूपमा, यस सum्ग्रहालयको थप थप छ कि यो १ शताब्दी ई.पू. देखि पुनर्स्थापित भवनमा अवस्थित छ। सी
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » के हेर्न को लागी एस्टोर्गा, Leon को प्रान्त